Zvemagariro Midhiya Mapurisa muKushanda | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 10, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Iyi inonakidza infographic pane yemagariro media midhiya. Iyo yakajeka inonakidza graphic asi, sekune mazhinji magariro midhiya nhaurirano hurukuro inongotarisa pane chero kudzivirira bhurandi, kusimudzira iyo mhando, kana rusununguko rwevashandi. Dambudziko nderekuti pane mumwe mukana muhombe pakati peiyo iyo infographic inobata asi haiende mune zvakakwana ruzivo nezve…
Iko kugona kwehukama nevezera, nyanzvi, vatengesi nevatengi kunopa mukana kumakambani kukurumidza kupa uye kubvisa ruzivo. Panzvimbo pekugara parunhare kana kuyedza kuverenga kuburikidza nemagwaro uye kubatsira mafaera, vashandi vako vanogona kuwana online uye kubatana nevamwe vashandisi, vatengesi kana vanachipangamazano kuti vawane ruzivo rwavanoda kuti basa riitwe.
Zvakare, izvi zvinogona kushandiswa mukutora, kukwikwidza kutsvagisa, ongororo, hukama hwevatengi… kune zvakawanda zvakanakira bhizinesi rezvemagariro! Uye na 70.7% yemakambani anovharira masaiti enhau, pane mukana unoshamisa wekambani yako kuti usvetuke nekushandisa mukana wepakati.
Icho chimwe chinhu chekucherechedza pano… nemafoni mafoni mukukura kwakapetwa kaviri, makambani ari kuzvinyengera nekufunga kuti ari kuvharira vezvenhau masaiti. Izvi zvinondiyeuchidza nezvemazuva akanaka eInternet, apo chete vashandi vaviri munzvimbo dzakakosha zvikuru vaigona kuwana iyo Internet uye isu vamwe taifanira kushanda chinyararire pane crappy intranet. Isu takangozvipa zvese ndokutamba Solitaire pachinzvimbo.
Sei munyika ungavharira vashandi vako kuti vasabatana nevamwe nyanzvi? Kana vashandi vako vari paFacebook uye vari isina zvibereko, haisi Facebook kana nyaya yekuchengetedza, inyaya yekuita… vadzinge basa! Vatungamiriri vakanaka vanobvisa ma roadblock, kwete kuvawedzera.
Chirevo kubva kuInfographic:
Nhasi, makambani ari kushandisa masocial media maratidziro emhando dzose uye hukuru - uye hazvishamise kuti nei: mwedzi wega wega tinonzwa nezveimwe njodzi yePR nekuda kweiyo imwechete tweet yaenda zvisirizvo. Izvi zvakaita kuti makambani mazhinji arambidze kushandiswa kwenzanga zvachose apo vashandi vari pabasa. Asi mamwe makambani ari kutora nzira yakapesana, achitenda kuti chizvarwa chakakwidziridzwa pane tekinoroji chinobudirira zvakanyanya kana chichibvumidzwa kuchishandisa pakufunga kwavo.
Usaore moyo Nemagariro Media